လူတစ်ယောက် ဘဝဘယ်နှစ်ခုရှိသလဲ ?သင့်မှာ ဘဝဘယ်နှစ်ခုရှိသလဲ ??လူတော်တော်များများဟာ “လူတစ်ယောက် ဘဝတစ်ခု”နဲ့ပဲ ကျေနပ်နေကြပါတယ်။ကျော်ကြားတဲ့လူတစ်ယောက် အဲ့ဒီလူမှာ ဘဝနှစ်ခု၊ သုံးခုအနည်းဆုံးရှိတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင် ယနေ့ခေတ် လူငယ်တော်တော် များများကြိုက်ကြတဲ့ “စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်” ပေါ့ဗျာ။
သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်လည်းဟုတ်တယ်။စာရေးသူတယောက်လည်းဟုတ်ပြန်တယ်။ဒါဆိုသူ့ဟာ လူတစ်ယောက် ဘဝလေးခုနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ သူပဲ။အားကျစရာမကောင်းဘူးလားဗျာ??ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အသက် (၃၀) အတွင်း ဘဝတွေ များစွာဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။
ကျောင်းသားဘဝ၊ ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းဘဝ၊ ဒီဇိုင်းနာဘဝ၊ ကျူရှင်ဆရာဘဝ၊ အရောင်း သမားဘဝ၊ မာကတ်တင်းသမား၊ ကုန်စုံဆိုင်, အရုပ်ဆိုင်, အထည်ဆိုင် ဈေးသည်ဘဝ၊ သင်ကြားရေးဆရာဘဝ၊ လုပ်ငန်းရှင်ဘဝ၊ စာရေးဆရာဘဝ၊ ဟောပြောရေးဆရာ ဘဝ စသည်ဖြင့် များစွာဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။
ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပေါင်းများစွာနှင့်အတူ ဘယ်လိုဘဝ တွေကို ဆက်လက်ဖြတ်သန်းရဦးမလဲ အမြဲတွေးပါ။ယနေ့ခေတ်လူငယ်အများစုဟာ တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲ လုပ်ကြတယ်။ ကျောင်းတက်တယ် ကျောင်းစာကိုပဲအာရုံစိုက်တယ်။ မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပညာရှာတဲ့ အရွယ်မှာ ပညာရှာတာ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။
ကျောင်းတက်နေတုန်း ဘာလုပ်လို့ရတာရှိသေးလဲ ? တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ဗျာ။ များသောအားဖြင့် ကျောင်းချိန်တွေဟာ နေ့လည်ပိုင်းမှာပြီးလေ့ရှိကြတယ်။အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ ရနိုင်မယ်။
တခြားဝါသနာပါတဲ့အရာတစ်ခုလုပ်လို့ ရနိုင်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် မိခင်ဘာသာစကားအပြင် တခြားဘာသာတစ် ခုကိုဆက်လေ့လာမယ်။ အကျိုးရှိရှိပြန်အသုံးချမယ်။
မိခင်ဘာသာစကားအပြင် အခြားဘာသာတခုခုကို တတ်မြောက်ထားတဲ့လူဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ ကော စီးပွားရေးအရာမှာကော လူမှုရေးမှာပါ အများကြီး အသာစီးရပါတယ်။ပင်တော့ပင်ပန်းမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရတယ်။
အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ထား အဲ့ဒီအလုပ်ကြောင့် ကိုယ်ဘယ် လိုလူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာ သိမြင်လာမယ်။နစ်နာစေမယ့်အရာ တခုမှမပါပါဘူးဗျာလူတယောက်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာ ညစ်ထုတ်ရင် ညစ်ထုတ်နိုင်သလောက် ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားပါ။နောက်ဆုံး လူတွေကအားကျကြမယ်ချီးမွမ်းကြမယ်။ “မင်းဟာ တကယ်တော်တဲ့လူငယ်ပဲ” ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူ စရာကောင်းလိုက်မလဲ။
ဘဝတစ်ခုမှာပဲ ကျေနပ်မနေပါနဲ့ !
ဝါသနာပါမယ့်ဘဝသစ်တခုကိုလည်း ထပ်ရှာကြည့်ပါ။ သင့်အတွက် အကျိုးယုတ်စေမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။